အာရုံကြောစနစ် - ဝီကီပီးဒီးယား
ဤဆောင်းပါး သည် မပြီးစီးသေးပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ အ​ကြောင်းအရာ ပိုမိုပြည့်စုံလာစေရန်အတွက် ဆက်လက်ရေးသားနိုင်သည် သို့မဟုတ် ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာ တွင် ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်သည်။ (၁၈ ဧပြီ၊ ၂၀၂၀)
အာရုံကြောစနစ်သည် သတ္တဝါတို့တွင် အလွန်ရှပ်ထွေးလှသော အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်၏ အခြားအစိတ်ပိုင်းများသို့ အချက်အလက်များပေးပို့ခြင်း ၊ ၎င်းတို့မှ တဖန် အချက်အလက်များ လက်ခံရယူခြင်းဖြင့် သတ္တဝါတို့၏ လှုပ်ရှားမှုနှင့် အာရုံခံစားမှုကို ထိန်းညှိပေးသည်။ အာရုံကြောစနစ်သည် ခန္ဓာကိုယ်အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်၏ ပြောင်းလဲမှုများကို သိရှိပြီး ဟော်မုန်းစနစ်နှင့် တွဲဖက်လုပ်ဆောင်၍ ၎င်းအပြောင်းအလဲများကို တုံ့ပြန်စေသည်။
အာရုံကြောတစ်သျှူးများသည် လွန်ခဲ့သော နှစ်သန်းပေါင်း ၅၅၀ မှ ၆၀၀အတွင်းမှစကာ တီကောင်ကဲ့သို့ သက်ရှိများ၌ စတင်တည်ရှိခဲ့သည်။
ကျောရိုးရှိ သတ္တဝါများတွင် ၎င်းကို ဗဟိုအာရုံကြောစနစ် နှင့် အစွန်အဖျားအာရုံကြောစနစ်ဟူ၍ နှစ်ပိုင်းခွဲခြားထားသည်။ ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်တွင် ဦးနှောက် နှင့် ကျောရိုးနဗ်ကြောစည်း တို့ပါဝင်သည်။ အစွန်အဖျားအာရုံကြောစနစ်တွင်မူ ဗဟိုအာရုံကြောစနစ် နှင့် အခြားခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများကို ချိတ်ဆက်ထားသော ရှည်လျားပြီး ထုပ်ပိုးထားသည့် နဗ်အမျှင်တန်းများပါရှိသည်။
အာရုံကြောစနစ်(နားဘတ်စ်)ဆိုသည့် အမည်သည် နဗ့်ဟူသော ဦးနှောက်နှင့် ကျောရိုးနဗ်ကြောစည်းတို့မှ ထွက်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းအားလုံးကို ဖြန့်ကျက်ဆက်စပ်ထားသည့် ဆလင်ဒါပုံ အာရုံကြောမျှင်တန်းများမှ လာသည်။ရှေး အီဂျစ်၊ဂရိ နှင့် ရောမခေတ်တို့တွင် နဗ့်ကြောများကိုသတိထားမိသော်လည်း အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုမူ အဏုကြည့်ကိရိယာသုံးလို့ မလေ့လာနိုင်သေးခင်အထိ နားမလည်ခဲ့ကြပေ။
အာရုံကြောစနစ်တွင် အာရုံကြောဆဲလ်(neuron) နှင့် ကွန်ယက်ဆဲလ်(glial cell)ဟူ၍ ဆဲလ်နှစ်မျိုးပါဝင်သည်။
အာရုံကြောစနစ်သည် ထူးခြားသောဆဲလ်တစ်မျိုးဖြစ်သော အာရုံကြောဆဲလ်(Neuron)တည်ရှိခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာရသည်။အာရုံကြောဆဲလ်သည် အခြားသောဆဲလ်များနှင့် ကွာခြားမှုတော်တော်များများရှိသော်လည်း ၎င်းတို့၏ အခြေခံကျသော လုပ်ဆောင်ချက်မှာ နဗ်ကြောစုံ(synapse)မှတစ်ဆင့် အခြားဆဲလ်များနှင့် ဆက်သွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ နဗ်ကြောစုံဆိုသည်မှာ အချက်ပေးမှုများ လျင်မြင်စွာဖြတ်သန်းသွားနိုင်သည့် မော်လီကျူးဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်ပါဝင်သည့် ဆဲလ်အမြှေးပါးနှစ်ခုဆုံမှတ်ဖြစ်သည်။အာရုံကြောဆဲလ်အများစုတွင် နဗ်ကြောဝင်ရိုး(axon)တစ်ခုစီပါရှိသည်။ နဗ်ကြောဝင်ရိုးသည် အာရုံကြောဆဲလ်နှင့် ဝေးကွာသော ခန္ဓာကိုယ်ရှိ အခြားအစိတ်အပိုင်းများကို ရောက်နိုင်ကာ ထောင်ပေါင်းများစွာသော နဗ်ကြောစုံဆိုင်ရာ ထိတွေ့မှုများ ပြုလုပ်နိုင်သော ဆဲလ်လက်တံတစ်ခုဖြစ်သည်။နဗ်ကြောဝင်ရိုးသည် နဗ်ကြောအစည်းအနှောင်များအကြားမှ ‌ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကို ရောက်ရှိနိုင်သည်။
↑ Tortora, G.J., Derrickson, B. (2016). Principles of Anatomy and Physiology (15th edition). J. Wiley. ISBN 978-1-119-34373-8.
↑ Kandel ER, Schwartz JH, Jessel TM, eds. (2000). "Ch. 2: Nerve cells and behavior". Principles of Neural Science. McGraw-Hill Professional. ISBN 978-0-8385-7701-1.
↑ Kandel ER, Schwartz JH, Jessel TM, eds. (2000). "Ch. 4: The cytology of neurons". Principles of Neural Science. McGraw-Hill Professional. ISBN 978-0-8385-7701-1.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အာရုံကြောစနစ်&oldid=705314" မှ ရယူရန်
၁၈ ဧပြီ၊ ၂၀၂၀ မှ တိုးချဲ့ရန် လိုအပ်သည့် ဆောင်းပါးများအားလုံး